December 2016 ~ Today's Mobile Training & Service Center
Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ System update ပေးရက်နဲ့ဘာေ...
Android Helper Toolkit
MTK FRP Reset Files
True Smart Tab7100% Test Firmware Free Download
Xiaomi ဖုန်းများအတွက် Mi Reset Tool
Hisilicon BoardFirmware ရေးနည်း (FIRMWARE FIX)
Samsung စမတ်ဖုန်းများအတွက် Model Checker Tool
Samsung DRK Fail Error အားဖြေရှင်းနည်း
Mobile ဖုန်းစာရင်းကိုင် apk update version ထပ်မံထွ...
Hardware Service သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အခြေခံလေးတွေလ...
Samsung Keypad ဖုန်းများအား Reset ပြုလုပ်မယ်
Sony Flash Tool Version 0.9.23.0 မှာ Firmware ရေးရ...
G730-U00 no sim error ဖြေရှင်းနည်း
Huawei ရဲ့ Huawei မြန်မာ Website
မိန်းကလေးများ အကြိုက်တွေ့မဲ့ Pink Dailer apk
မြန်မာစာ သတ်ပုံများကို လေ့လာနိုင်မဲ့ Tet Pone Appl...
Redmi Note4မှာ Baseband Unknow ဖြစ်ခဲ့ရင်
Xiaomi MIUI 8 မှာ မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း ( No need ...
Xiaomi ဖုန်းများကို Lock များဖြုတ်ပေးနိုင်မဲ့ mipc...
eMMC လဲလှယ်ခြင်းကို အခြခံကျကျလေ့လာနိုင်မဲ့ PDF ဖို...
သဘာဝဘေးအသိပေး DAN Myanmar Application
PHICOMM C730lw Firmware
Android စမတ်ဖုန်းများမှာ Virus ဝင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံး...
Mobile Hardware ပိုင်းကို အခြေံလေးတွေကစပြီး လေ့လာမ...
iOS Device အသုံးပြု သူတွေအတွက် Facebook ပေါ်က Vide...
Flyso Social Network Apk
Samsung ADB Enabler
TWRP app ကို Google Play မှာရယူနိုင်ပြီ
Android တွေအတွက် Box Crack Aio Tool
ဖုန်းတစ်လုံးတွင် power ic အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပြစ်ချ...
Samsung Galaxy Note5အားခွါပြထားတဲ့ Photos
Samsung ဖုန်းများရဲ့ FRP lock ကို FRP Fast Call သု...
Clash of Clan update ထပ်မံထွက်ရှိ
Android ဖုန်းတွေရဲ့ Back key , Home key , Menu key...
All in One Mobile Service Tool
Xiaomi Users တွေသိသင့်သော Android Version နဲ့ Devi...
Facebook Link များနှင့် Broswer မှာ Root မလိုမြန်မ...
Sony ဖုန်းတွေအတွက် Screen lock ဖိုင်ပြုလုပ်ပုံနှင့...
Huawei Honor 4X မှာ 2G သာရပြီး 3G လိုင်းမတက်တော့ရင...
Qualcomm ဖုန်းများအတွက် Background Open setting ကု...
Honor H30-U10 B115 Burma dload Firmware
2016 MTK Flashtool Tool
Flash မီးကို လက်ခုပ်တီးပြီး အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင...
Huawei Y560-U02 Flashtool Firmware
HuaweiUpdateExtractor Tool New version
HUAWEI G520-5000 MIUI V5 SP Flash Firmware
Huawei ဖုန်းများအား Hardware ပိုင်းအသုံးပြုရန်အထော...
5A Supply ကို သင်သေချာအသုံးပြု တက်ပြီလား ???
KBZ ဘဏ်ခွဲတွေမှာ MPT Sim Card များအားမှတ်ပုံတင်နို...
MTK စမတ်ဖုန်းတွေကို Root မလို META Mode ကနေ IMEI i...
SIM Card အထိုင်အကြောင်း လေ့လာကြမယ်
လူကြိုက်များလှတဲ့ B612 ရဲ့ latest version
Hello R100 အတွက် Repartition error Fix Firmware
Sim card များကိုအဆင်ပြေပြေ မှတ်ပုံတင်ကြရအောင်
Mi 4i အတွက် Mi account remove firmware
ဖုန်းထဲက Contact နံပါတ်တွေကို PDF ဖြင့် Backup ပြု...
Ring Speaker way for Redmi Note 4g Dual sim
MTK Device များရဲ့ network ic mt6166 ( or ) mt6167...
Zenfone 4s T00Q ကို adb command အသုံးပြု ပြီး Firm...
Samsung Lock ဖြစ်နေသောဖုန်းများကို adb သိအောင်ပြု ...
Shuame software ကိုအသုံးပြု ပြီး Screen lock မျာြး...
Huawei Y511-U00 မှာ VBAT Short error တက်ခဲ့ရင်ပြန်...
ASUS စမတ်ဖုန်းများအား FRP lock ကျခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖြေ...
Huawei G610-U00 အတွက် Touch way
Telenor Operater နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သိထားသင့်တာလေးတွေ...
Huawei G730 Device တွေမှာ Low Battery Temperature ...
Meizu Device များရဲ့ Flyme 5/6 Myanmar Font
Lords of Discord command game ( Online )
G730-C00 မှာ Touch error ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖြေရှင်...
Samsung Device တွေအတွက် Samsung Z1 Font
Huawei G610-U00 eMMC Replacement Tutorial Video
Android တွေအတွက်အရမ်းမိုက်တဲ့ Easy Team Tool v2.0
Meizu မှမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Quad HD Display နဲ့ Meizu ...
IC data ပြန်ရေးရင် သတိထားရမဲ့အချက်များ
Redmi Note3ကို Deadboot Repair ပြု လုပ်နိုင်မဲ့ ...
Mi Tool Application for Xiaomi Device
Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ System update ပေးရက်နဲ့ဘာကြောင့်မရတာလဲ
8:31 PM today's Blog No comments
Android စမတ်ဖုန်းတွေမှာ System update ပေးရက်နဲ့ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတာကို
user တော်တော်များများမေးထားတာကြောင့် ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
user တွေအနေနဲ့မိမိဖုန်းကို သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ System update ပေးထားတဲ့အချိန်
Download ပြုလုပ်လို့ရပေမဲ့ install ပြုလုပ်လို့မရတာကတော့ ဖုန်းမှာ Root ပြု လုပ်ထားခြင်း
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ system ပိုင်းကိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်
Root ပြု လုပ်ခြင်းကို ကုမ္ပဏီများမှတားမြစ်ထားပါတယ်။ User တွေအနေနဲ့လည်း
Root ပြု လုပ်မှသာ မြန်မာစာအသုံးပြုနိုင်တာတို့ system ပိုင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး
ဖုန်းကိုအခြား theme ဆိုင်ရာ media ပိုင်းဆိုင်ရာ အစရှိသောပြင်ဆင်မှု့များကို
အသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Root ပြု လုပ်ခြင်းဟာလည်း
ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လွယ်ကူမှု့ရှိလာတာကြောင့် အလွယ်တကူ
Root ပြု လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Root ပြု လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ System update ပေးတဲ့အခါမှာ
Download တောင်မပြု လုပ်ပါနဲ့။ ပိုက်ဆံကုန်တာပဲအဖတ်တင်သွားပါမယ်။
Install ပြုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိရှိစေရန် အသိပေးရေးသားမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Today's Mobile (သမိုင်းစင်တာ)
အမှတ်(254)၊ မြေညီထပ်၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ (ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်-သမိုင်းလမ်းဆုံအနီး)၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
☏ - 0932226999, 09-794555999
Today's Mobile (လှည်းတန်းစင်တာ)
အမှတ်(15/17)၊ Moon Bakeryအပေါ်ထပ်၊ ၂ လွှာ(A)၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ လှည်းတန်းကားမှတ်တိုင်ရှေ့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
☏ - 09-32227000 , 09-974373000
7:56 PM today's Blog No comments
Android ဖုန်များကို unlock တွေဘာညာတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ Toolkit
လေးဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
အသုံးပြု လိုရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• Android Helper Toolkit Download Link •°•°•°•
password - magwayminbumobilehelp
7:42 PM today's Blog No comments
Xiaomi ဖုန်းများအတွက်တော့ အဖိုးတန် apk လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ apk လေးကနေဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ ဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်
Zawgyi X1 ဆိုတာဘာလဲ?
ZawGyi Font အလှ ၇ မျိုးကို အင်တာနက်မလို Root မလို Mi အကောင့်မလိုပဲချိန်းနိုင်ပါတယ်။ ( Zawgyi X1 Font ကိုအချေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်)
Zawgyi X1 ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ မိမိကြိုက်တဲ့ Font ကိုနှိပ်လိုက်ပါ System Font ဆိုတာပေါ်လာပါမယ် System Font ကိုနှိပ်လိုက်ပါ နှိပ်တဲ့ Font နာမည်လေးပေါ်နေပါတယ် (ဥပမာ ဇော်ဂျီ ZG ကိုနှိပ်လိုက်ရင်
ဇော်ဂျီ ZG ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်) အဲကောင်ကိုတချက်နှိပ်ပြီး Apply ပါ Reboot နှိပ်ပါ ဖုန်းပိတ်သွားပြီးပြန်ပွင့်လာရင်ရပါပြီ။
Disable Finddevice service ဆိုတာဘာလဲ ?
Finddevice Disable Service ကို User တွေအသုံးမပြုသင့်ပါ ဖုန်းဆားဗစ်သမားများအတွက်သာဖြစ်ပါ
တယ် Finddevice Service ကို အလုပ်မလုပ်အောင်ကူညီပေးတဲ့ App လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီ App လေးအသုံးပြုဖို့ Root မလိုပါဘူး Disable ကိုနှိပ်ပြီး Install လုပ်ရုံပါပဲ။
Wifi ချိတ်လိုက်တာနဲ့ Mi Lock ကျသွားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာသုံးလို့ရပါတယ် Wifi မချိတ်သေးခင် ( လော့မကျသွားသေးခင်) အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အလုံးတိုင်း Version တိုင်းမှာရလား?
အလုံးတိုင်းရမရမစမ်းရသေးပေမဲ့ Redmi 3s 3x နဲ့ Mi5 တို့မှာစမ်းသပ်အောင်မြင်ပါတယ် MIUI 8.0 နှင့်အောက် ဗားရှင်းများမှာသာရပါတယ် 8.1 မှာ Support မလုပ်ပါ ကဲလိုအပ်ရင်အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ပါ။
•°•°•°• TTA Mi Lock Font apk Download Link •°•°•°•
credit - Than Toe Aung
6:54 AM today's Blog No comments
MTK Chipset အမျိူးအစားတွေထဲက အသုံးများဆုံး MT နံပါတ်
များရဲ့ FRP Reset File များကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
စိုးလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်ပါအမျိူးအစားတွေအတွက်
ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြု ပြီးသားပါ။
SP Flashtool နှင့် Firmware တင်သလိုသာ Flash ပေးရုံပါပဲ။
•°•°•°• MTK Reset Files Download Link •°•°•°•
password & credit - MyanmarXDA
6:20 AM today's Blog No comments
True စမတ်ဖုန်းအမျိူးအစားတစ်မျိူးဖြစ်တဲ့ Smart Tab7အတွက်
အဆင်ပြေတဲ့ Firmware လေးပါ။ Free Download ရယူနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်များများလင့်တွေကတော့ password တွေခံထားပါတယ်။
•°•°•°• True Smart Tab7Firmware Download Link •°•°•°•
5:41 AM today's Blog 1 comment
Xiaomi ဖုန်းများမှာ Screen lock ပေးပြီးမမှတ်မိတော့ရင်
Lock remove ပြု လုပ်နိုင်မဲ့ Mi Reset Tool ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Tool လေးကိုဖွင့်ပြီး ဖုန်းကို Recovery mode အနေအထားမှာထားပြီး
ချိတ်ဆက်ကာ အသုံးပြု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးလိုရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• Mi Reset Tool Download Link •°•°•°•
credit - Thiha Aung
7:44 AM today's Blog3comments
Boardfirmware လည်းရှိ အသုံးလည်းများတဲ့ H30-L02 လေးနဲ့စမ်းပြမယ်ဗျ boardfirmware တင်မယ်ဆိုမှတော့
Firmware file လိုမယ်
ဒီမှာယူ •°•°•°• Download Here •°•°•°•
firmware တင်မဲ့ mode လိုမယ်
qualcomm မဟုတ်တော့ဘူး hisilicon ဖြစ်သွားပြီ
အဲ့တော့ hisilicon download mode ကိုဝင်နည်းလေးအရင်ပြောမယ်
qualcomm မှာ 9008 mode ကို အလွယ် qualcomm download mode ခေါ်သလို
hisilicon မှာလည်း HUAWEI USB COM 1.0 ကို
hisilicon download mode လို့ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်
အရင်ဆုံး testpoint လေးအကြောင်းပေါ ပုံ မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း
TP3034 ဆိုတဲ့ testpoint အုပ်စုထဲက USB_D_P ဆိုတဲ့
testpoint လေးက BOOT_SEL ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Hi6220 ရဲ့  ပင်နံပတ် E1 ကို ၀င်သွားတာကိုမြင်ရမှာပါ
Qualcomm တုန်းကဆို testpoint ကို 1.8v ထိုးလိုက်တာနဲ့ qualcomm download mode ရောက်ပြီ
testpoint ကို GND ကျွေးမှ hisilicon download mode ၀င်တယ်ဗျ
hisilicon download mode ဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်
အလွယ်ခေါ်လိုက်တာ device manager မှာတတ်တာက
HUAWEI USB COM 1.0 ဆိုပြီးတတ်လာလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ testpoint ထောက် (GND ဘယ်ကယူယူပေါ့) usb ကြိုးထိုးလိုက်
driver တင်ထားရင် device manager မှာတတ်လာလိမ့်မယ် ပုံမှာကြည့်ပါ
(battery ထည့်ထည့် မထည့်ထည့် ပြသနာမရှိပါ)
အိုကေ ဖိုင်လည်းရှိပြီ တူးလည်းရှိပြီ ဒရိုင်ဘာလည်း သိပြီဆို
firmware file ကို zip ဖြည်လိုက်တော့ factory_version.tar.gz ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုေ
တွ့မယ် ထပ်ဖြည်လိုက် (mi firmware) တွေဖြည်ဖူးတယ်ဟုတ်
factory_version.tar ထပ်ထွက်လာမယ် ထပ်ဖြည်လိုက်အုံး bootloader image တို့ဘာတို့ဖိုင်လေးတွေတွေ့မယ်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် desktop ပေါ်မှာ
newfolder တစ်ခုဆောက်ပြီး ဖိုင်တွေရွှေ့ထားလိုက်တယ်
filename ကြောင့် error တတ်တာ
မရှိတော့ဘူးပေါ့ xml file ရွေးတော့လည်း လွယ်ကူအောင်....
tool ကို zip ဖြည်လိုက်ပြီး IDTML01.exe ကို ဖွင့်မယ် xml ရွေးဖို့အတွက် setting ကို နှိပ်မယ်
huawei လို့ထည့်ပေးလိုက် DLL Model မှာ
IDTML01 Tool ထဲက Model.dll ကိုရွေးပေးပါ
Config File မှာတော့ Boardfirmware Folder ထဲက
HL1H30L02MAA001023.xml ကို ရွေးပေးပါ
ကျန်တာမပြောင်းတော့ဘူး OK နှိပ်လိုက်
ဲပြီးရင် startdownload ကိုအရင်နှိပ်မယ်ပြီးမှ testpoint ထောက်ပြီး ကြိုးကိုထိုးလိုက် qualcomm လို
tool ကချက်ချင်းတန်းမဆွဲပါဘူး တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်လောက် စိတ်ရှည်ရှည်လေးထိုင်စောင့်ပေးပါ
tool က သိပြီဆိုတာနဲ့ ပုံထဲကအတိုင်းUSB 1 ဆိုတဲ့အကွက်
လေးမှာ progress 2% ထိဆွဲပြီးတာနဲ့ phone က fastboot mode ထဲကိုရောက်ပြီးး
(progress 2% ထိဆွဲပြီး fail သွားတယ် ဖုန်းက fastboot mode ထဲမရောက်ဘူးဆို emmc ပျက်နေပါပြီ)
qualcomm တုန်းကလို fastboot image တွေ flash နေပါလိမ့်မယ် sending ....writing..okay ပြနေပီဆို အဆင်ပြေပါတယ်
system ရေးတဲ့ချိန်ကျ Fail ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့
FAIL (32s) Error(29) လို့ပြပြီးးရပ်သွားပါတယ် ဖုန်းကတော့ fastboot mode ထဲမှာပါပဲ အဲ့ဒါဆို
ပုံထဲကပြထားတဲ့အတိုင်း Workspace အောက်က USB 1 ကို right click နှိပ်ပြီး show latest log ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
sending 'system' (528683 KB)...
FAILED (remote: data too large) လို့ ရေးထားတယ် ကိုယ့်ဘာသာပဲ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဖိုင်တွေကို firmware file ထဲက
bootloader image ထဲက ယူပြီး ဒီတိုင်းပဲ flash လိုက်တယ်
fastboot flash efuse efuse.img
fastboot flash hisitest0 hisitest0.bin
fastboot flash hisitest1 hisitest1.bin
fastboot flash hisitest2 hisitest2.bin
ရိုက်ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းက recovery mode ထဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ် ဒါဆို ရပါပီ
h30-l02 dload တစ်ခုခုနဲ့ ကောက်တင်လိုက်ပါ
နောက်ဆက်တွဲပြသနာကတော့ hisilicon တွေရဲ့  ထုံးစံအတိုင်း
emmc လဲရင် network lock ကျတာပါပဲဗျာ ဒီနေရာမှာ *အထူးသတိထားရမှာက
emmc အလွတ်ကပ်ပြီးရေးမယ်ဆို sandisk 8gb ဆို sandisk 8g
skhynix 8gb ဆို skhyinx 8gb တူတာကိုသာထည့်မှ အောင်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ boot size rpmb size မတူကြလို့ဘာ တူရင်တော့ ပြသနာမရှိဘူးနော်
qualcomm တုန်းကဆို 4gb ဆို ဘာလာလာ samsung 4g b309 ထည့် တန်းရေး အိုကေပဲ ဘာလို့ဆို qualcom boardfirmware က
boot size rpmb size ကိုချိန်းပေးနိုင်တယ် hisilicon ကျတော့ မချိန်းပေးနိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ samsung 8Gb emmc
B314 ကိုထည့်မယ်ဆို box တစ်ခုခုဖြင့် အရင်ဆုံး boot size rpmb size ချိန်းပေးမှသာအောင်ပါမယ်
အမှားပါတာများရှိရင် ဆရာများ ၀င်ပြင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာ ကဲ နောက်ထပ် hi cpu သုံးဖုန်းတွေအတွက်ကတော့
ပိတ်သတ်ကြီးကိုပဲ အားကိုးလိုက်တော့မယ်နော် :D
မူရင်းရေးသားသူ - Firmware Fix
7:30 AM today's Blog No comments
Samsung စမတ်ဖုန်းများကို Model , Version , Security date ,
Buildnumber , Region တို့ကိုစစ်ဆေးနိုင်မဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါ။
ဒီ Tool လေးကိုတော့ Nyi Nyi Paing မှရေးသားမျှဝေပေးထားတာပါ။
Tool ကိုဖုန်းကနေ USB Debugging on ပြီး Normal mode ကနေသာ
အသုံးပြု ရုံပါပဲ။ အသုံးပြု လိုရင်တော့ အောက်လင့်ကနေ ဝင်ယူပါ။
•°•°•°• Samsung Model Checker Download Link •°•°•°•
password - nyinyipaing
7:11 AM today's Blog No comments
Samsung တွေ DRK fail ပြနေလို့ စိတ်ညစ်မနေကြနဲ့ဗျို့။ firmware ကို zip ဖြည်ထုတ်လိုက်ပါ။ cm, boot, system, sboot အစရှိတဲ့ ဖိုင်လေးခုကို အောက်က Magicians Tool ကို zip ဖြည်ပြီး Folder တစ်ခုတည်း သွားထားပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် bat file လေး run ပါ။ BL, AP file လေးထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ odin ရဲ့ BL နဲ့ AP tab မှာထားပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာရင် DRK fail ပျောက်ပါပီ။
•°•°•°• Magicians Tool Download Link •°•°•°•
credit - Hein Maung
Mobile ဖုန်းစာရင်းကိုင် apk update version ထပ်မံထွက်ရှိ
5:59 AM today's Blog No comments
Mobile ဖုန်းစာရင်းကိုင် apk တစ်ခုကိုတင်ပေးပြီးနောက်ပိုင်း
apk ရဲ့အဆင်မပြေမှု့ကြောင့် Developer မှ အဆင်မပြေတာတွေကို
ပြင်ဆင်ပြီး update ထပ်မံထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ယခု version တွင်
- လအလိုက် ရောင်းရငွေ
- လအလိုက် အသားတင်အမြတ်
- လအလိုက် အရောင်းရဆုံးကုန်စည်
- လအလိုက် အရောင်းအနည်းဆုံးကုန်စည်
- လအလိုက် တစ်ရက်ပျမ်းမျှ ရောင်းကြေး
- လအလိုက် တစ်ရက် အသားတင်အမြတ်
- လအလိုက် အမြတ်ရာခိုင်နှုန်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
- ဖိနပ်ဆိုင် နှင့် အခြားပုံစံတူ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
•°•°•°• Mobile ဖုန်းစာရင်းကိုင် apk Download Link •°•°•°•
credit - Tin Ko Ko Lat
Hardware Service သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အခြေခံလေးတွေလည်း သိထားသင့်
5:47 AM today's Blog No comments
ဘယ်အရာမဆို အခြေခံလေးတွေသိထားရင် အကောင်းဆုံးပါ။
ဒါကြောင့် Mobile Hardware သမားတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့အခြေခံ
Short ကျရင် ပူတဲ့အလုံးဖြုတ်
C နဲ့ L နှစ်ခုရှော့ကျနေရင် L ကိုအရင်ဖြုတ်
Ohm Scale နဲ့ VD မတူဘူး
တစ်လုံးဖြုတ်တာနဲ့ပါဝါသေသွားစေတဲ့ အိုင်စီအစုအဖွဲ့ကို ပါဝါ Section လို့ခေါ်တယ်
အိုင်စီအောက်ကငုတ်ပြုတ် မပြုတ် မီတာနဲ့အလွယ်တိုင်းလို့ရတယ်
Ground တစ်စချမထားတဲ့ R တန်ဖိုးကိုဘုတ်ပေါ်တင်တိုင်းနိုင်တာ စဆရကတွေပဲရှိတယ်
FET နဲ့ ပုံမှန်Transisor ကွဲအောင်ကြည့်
ပါဝါလမ်းကြောင်းပုံစံနှစ်မျိုးနားလည်ရင် No power တွေအကုန်ရမယ်။ (Skill ကျင့်ထားပါ)
မီတာတစ်လုံးရဲ့ Limitation သိရင် Network မှာတိုင်မပတ်တော့ဘူး
CPU ကဦးနှောက်ဆို Crystal ကနှလုံးသား
VD တိုင်းတတ်ရင် အိုင်စီတစ်လုံးအထိရမယ်
V လမ်းကြောင်းသိရင် အစအဆုံးရမယ်
5:31 AM today's Blog No comments
Samsung Keypad ဖုန်းများအား Reset ချချင်သူတွေအတွက် reset code ကို
သိရှိနိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့လင့်ကနေ Download ရယူပြီး
zip ဖြည်ကာ အထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရုံပါပဲ။ group မှာ Samsung keypad
passcode ကျနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ သတိရပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
•°•°•°• Reset code file Download Link •°•°•°•
Sony Flash Tool Version 0.9.23.0 မှာ Firmware ရေးရာတွင် Pattern , Pin , Password များမပြုတ်ခဲ့ရင်
8:21 AM today's Blog No comments
Sony Flash Tool Version 0.9.23.0 မှာ ပုံမှန်အတိုင်း Firmware ရေးရာတွင် Pattern , Pin , Password Lock တွေ မပျက်ပါဘူး။ Pattern , Pin , Password Lock တွေပါ ပျက်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ ၂ခုကို အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း Firmware ရေးပေးလိုက်ပါ။ အားလုံး ပျက်သွားပါလိမ့်မည်။
8:05 AM today's Blog No comments
G730-U00 ကို No Sim error တက်ခဲ့ရင်ဖြေရှင်းနည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
sim အထိုင်တွေမှာ 6pinရှိတယ်
pin 1 က clk ခုန်လှိုင်းလမ်းကြောင်း
pin2က srst rest ချတဲ့လမ်းကြောင်း
pin3က vsim voltကို pmuကပေးတဲ့လမ်းကြောင်း
pin4က sio dataပေးတဲ့လမ်းကြောင်း
pin5က တော့ ncပါ ဘာစီးဆင်းမူ့မှမရှိဘူး
pin6က တော့ groundပါ diagramလိုက်ကြည့်ပါ
no sim errorလာပြီဆိုစစ်ကမှာက volt ရယ် ground ရယ် dataရယ် ပေါ့ဗျာ အရင်ဆုံး groundကိုရှာ groundတွေ့တယ်ဆိုရင် သူ့ရှေ့ကvoltထွက်မယ့်အပင်ပေါ့ power နိုးပြီး second logoလောက်မှာမှ 2.8 voltထွက်တယ်sim ထည့်ထားရင် အဲ့voltကညိမ်နေပြီး sim မထည့်ထားရင် ချက်ချင်းပျောက်သွားမှာပါ
g730 u00ဖုန်းမှာ simအထိုင်မှာပါတဲ့ pinအားလုံးကို pmuက မောင်းတာပါ
တွေပြီအဲ့မှာ ground ကျနေရင် သူ့ရှေ့ကvoltpinဆိုတာသိတယ်ပေါ့ groundမကျတဲ့ဖုန်းဆိုသွားပြီးပေါ့
sim pin ရေတွက်နည်းသိထားမယ်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်
အဲ့ထောင့်ချိူးလေးအဆုံးက pinကို 4လို့သတ်မှတ် သူနဲ့ ထောင့်ဖြတ်တည့်တည်ကို pin 3ပေါ့ ကျန်တာဆက် ရေတွက်ယုံပါပဲ ပုံလေးပြထားပါတယ်။
credit - City Star
7:35 AM today's Blog No comments
Huawei မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Huawei မြန်မာ Website ကို
ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ website မှာဆိုရင် Huawei model
များရဲ့မြန်မာဈေးကွက်ကို သိရှိနိုင်မဲ့အပြင် Firmware များကိုပါရယူနိုင်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလိုရင်တော့ ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
•°•°•°• Visit for Huawei မြန်မာ Website •°•°•°•
2:51 AM today's Blog No comments
ဖုန်းခေါ်တဲ့ Dailer apk ကိုဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ အသုံးပြု ချင်တဲ့
မိန်းကလေးတွေတော့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ ပန်းရောင် Background နောက်ခံနဲ့
အရုပ်ကလေးတွေကို လှပအောင် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ apk လေးပါ။
အသုံးပြု လိုမယ်ဆိုရင်တော့ ရယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
•°•°•°• Pink Dailer apk Download Link •°•°•°•
မြန်မာစာ သတ်ပုံများကို လေ့လာနိုင်မဲ့ Tet Pone Application
2:31 AM today's Blog No comments
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများကို လေ့လာနိုင်မဲ့ Tet Pone Application ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေကို လေ့လာနိုင်မဲ့အပြင် game အနေနဲ့လည်း level သုံးဆင့်နဲ့
ဆော့ကစားနိုင်ပါသေးတယ်။ Application လေးကိုအသုံးပြုချင်ရင်တော့
•°•°•°•Tet Pone Application Download •°•°•°•
11:10 PM today's Blog No comments
Redmi Note4မှာ MIUI 8 ကို တင်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Baseband unknow ဖြစ်ခဲ့ရင်
အခုပေးထားတဲ့ Tool လေးနဲ့ ROM နဲ့ ပြန်တင်ကြည့်ပါ။
•°•°•°• Tool Download Link •°•°•°•
•°•°•°• ROM Download Link •°•°•°•
credit - Htet R Kar
Xiaomi MIUI 8 မှာ မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း ( No need Root )
10:43 PM today's Blog No comments
Xiaomi MIUI 8 Global & Stable တွေကို မြန်မာစာ Root မလိုထည့်သွင်းနိုင်စေရန်
နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ User တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Font zip လေးကိုရယူပြီး လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို လေ့လာလိုက်ပါ။
•°•°•°• Font zip Download Link •°•°•°•
ဒါကတော့ Font မထည့်သွင်းရသေးခင် ဖြစ်ပါတယ်။
MyFile ထဲကိုဝင်ကာ အောက်ပါပုံအတိုင်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပါ။
Theme Folder ထဲကိုရောက်ရင် .data ဆိုတဲ့ Folder ကိုတွေ့ပါမယ်။
Download ပြု လုပ်ထားတဲ့ Font zip ကိုဖြည်ချလိုက်ပါ။
ဖြည်လို့ရလာတဲ့ Folder ထဲက .data folder ကို copy ယူပြီး Theme Folder ထဲက
အောက်ကပုံအတိုင်း ZawgyiX1 ကိုမြင်ရပါမယ်။
ZawgyiX1 ကိုရွေးပေးပြီး Apply လုပ်လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို Reboot ( Restart ) ပြု လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Reboot ပြု လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းမှာ Reboot ကျပြီးပြန်တက်လာရင်တော့
credit - Mg Mg Thar Kyi
Xiaomi ဖုန်းများကို Lock များဖြုတ်ပေးနိုင်မဲ့ mipctool
6:44 AM today's Blog3comments
Xiaomi ဖုန်းများကို ဘာလော့ညာလော့ လော့တွေကိုဖြုတ်ပေးနိုင်မဲ့
Tool လေးဖြစ်ပါတယ်။ lock ကျနေတဲ့ဖုန်းများကို Recovery mode
အနေအထားကနေ ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြု ကြည့်လိုရင်တော့ ရယူလိုက်ပါ။
•°•°•°• mipctool Download Link •°•°•°•
eMMC လဲလှယ်ခြင်းကို အခြခံကျကျလေ့လာနိုင်မဲ့ PDF ဖိုင်
6:32 AM today's Blog No comments
Android စမတ်ဖုန်းတွေကို Hardware နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
eMMC လဲလှယ်ခြင်းကို အခြေခံကျကျလေ့လာနိုင်မဲ့ PDF ဖိုင်လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Hardware service သမားတွေအတွက်တော့
•°•°•°• eMMC လဲလှယ်နည်း PDF Download Link •°•°•°•
6:16 AM today's Blog No comments
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွန်ကြားမှုးဦးစီးဌာနမှလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ သဘာဝဘေးအသိပေးချက်များကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘာဝဘေးကြိုတင်သတိပေးမိုဘိုင်း Application ကို “DAN Myanmar” ဟုရိုက်ပြီး Android ဖုန်းအတွက် Play Store နှင့် iOS ဖုန်းအတွက် App Store တို့တွင်ရယူနိုင်သလို အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကနေလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
•°•°•°• DAN Myanmar Application Download Link •°•°•°•
6:01 AM today's Blog 1 comment
PHICOMM C730lw အတွက် Firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
group မှာတောင်းဆိုထားတာလေးလည်း တွေ့တာကြောင့်
အဆင်ပြေစေရန် နှင့် လိုအပ်သူများအားလုံး ရယူနိုင်ရန်အတွက်ပါ။
•°•°•°• PHICOMM C730Lw Firmware Download Link •°•°•°•
Android စမတ်ဖုန်းများမှာ Virus ဝင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံး မြန်မြန်ဖြေရှင်းသင့်
12:15 AM today's Blog No comments
Android စမတ်ဖုန်းများမှာ Virus ဝင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံး မြန်မြန်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ Android ဖုန်းများကိုအမျိူးမျိူးသော ပုံစံများနှင့် Virus များဟာဝင်ရောက်နေပါတယ်။
user တွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှမဝင်အောင်လုပ်လို့ မရသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့် user တွေအနေနဲ့မိမိဖုန်းမှာ Virus ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ service ဆိုင်များသို့
အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ Virus များဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ
ဖုန်းရဲ့ Memory IC ပိုင်းကိုပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ ပထမကုန်ကျစရိတ်ထက်
ပိုမိုအကုန်ကျလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းအတွင်း Virus ဝင်လာပြီဆိုပါက အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းကြပါလို့
အသိပေးရင်း Virus ဝင်ရောက်ခြင်းနည်းပါးအောင်လည်း အမျိူးမျိူးသော Lucky draw တွေပေးနေတဲ့
ကိုယ်မသိတဲ့ page တွေဆိုဝင်ရောက်ခြင်း မပြုပါနဲ့လို့လည်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ iPhone တွေကို Lucky draw ပေးပြီးစက်ဝိုင်းလေးကိုလှည့်ပြီး
မဲဖောက်ရတဲ့လင့်လေးက ခေတ်စားနေပါတယ်။ အဲဒီ page ထဲမတော်တဆရောက်သွားပါက
ချက်ချင်းသာ ပြန်ထွက်ပေးပါ။ ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းအား
Virus ဝင်ရောက်ခြင်းကို သင်မသိလိုက်ပဲ ဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
Mobile Hardware ပိုင်းကို အခြေံလေးတွေကစပြီး လေ့လာမယ်
11:50 PM today's Blog No comments
Mobile Hardware service ပိုင်း error အချို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး
အခြေခံလေးတွေကို လေ့လာနိုင်ရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Hardware service လုပ်ကိုင်သူတွေအတွက်တော့ အထောက်အကူ
ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံသဘောတရားလေးတွေပါ။ တကယ်ကောင်းပါတယ်။
လို့ရအောင် ပုံလေးတွေကိုလည်း save ထားလို့ရပါတယ်။
credit - jumper way နှင့် နည်းပညာ